Microsoft: Biko tinye m na ndepụta gị nke Ferrari | Martech Zone
Oge erugo ịgba. (Ọ bụrụ na ị nwere ike ịse foto m ugbu a, ana m efegharị mkpịsị aka m ma na-ewute dị ka Louis Black kachasị mma.)
Ọtụtụ ado banyere ihe ọ bụla na ngọngọ ugbu a n'ihi na Microsoft zipụrụ ụfọdụ laptọọpụ Ferrari na Vista eburu ụzọ gaa ọtụtụ ndị na-ede blọgụ A-List. Ndị mmadụ na-apụ apụ. Ọ dị ka Microsoft na-azụ ntuli aka ma ọ bụ ihe ọ bụla, ma ọ bụ na ha nọ n'azụ igbu JFK, ma ọ bụ na ha rere ngwa agha nke mbibi oke na North Korea.
Anọ m na Scoble na nke a!
Bilie, ndị bekee, nke a bụ azụmahịa! Ọ bụ ọrụ dịịrị nke ahịa ọ bụla itinye ego ebe ọ ga-emetụta ọtụtụ ndị zụtara… oge. Have nwere mmefu ego, ị ka mma ka ọ rụọ ọrụ. Lee ndị a gupuru:
Microsoft na-arịọ ndị na-ede blọgụ (ha emeghị nke ọ bụla)
Ummmm, nke ahụ bụ ya.
Nke a abụghị ihe dị iche na Shaq na-enweta ụdị ọhụụ ọhụụ emere ndị sneakers maka ụbọchị ọ bụla n'afọ. Everymụaka ọ bụla na-egwu bọọlụ basketball na-ebeku nne ha na Shaq nwetara ndị sneakers n'efu mana ha enweghị? MBA! Mama na-edozi mgwakota agwa n'ihi na Shaq bụ onye na-emetụta ihe ma ọ na-akwụ ụgwọ 8 ugboro ole ọ kwesịrị maka ụfọdụ ndị sneakers na-adịghị mma.
See hụ mgbe njedebe nke Nascar agbụrụ? Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ na-etinye otu okpu, na-a aụ ihe ọ ofụ ofụ nke aha soda, na-atụba okpu ọzọ (ha abụọ nwere nnukwu akara log), ọ na-ebido ahịrịokwu ọ bụla site na aha ndị nkwado 5. "Agwara m, ịgwa gị Jim, Dupont a, Reeses, Toshiba, nke Livaị, Chevrolet gbagara ebe ahụ." Ọ bụ onye ọ bụla na-apụ na Nascar na-eti mkpu, "You're na-agbalị ịmetụta m na ụdị mgbasa ozi ahụ niile!". Mbanụ.
Ikekwe Tiger Woods kwesịrị inwe nkwuputa na uwe elu ya na e nyere ya klọb ndị ọ na-eji, ma ọ bụ bọọlụ, ma ọ bụ Cadillac. Ndị mmadụ, nweta ndụ. Anyị abụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị anọghị na akwụkwọ akụkọ ebe ekwesiri ịkewa usoro nke akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi n'ihi na ube nwere ike ikpebi ntuli aka. Adịghị m a anụ iyi ma ọ bụ swornụọ onye ọ bụla iyi. Abụ m onye na-ede blọgụ. Enwere m ndị na-agụ 500 kwa ụbọchị na ahịa azụmaahịa m anaghị ekpuchi ụgwọ nke ịntanetị m.
Naanị mmadụ nwere ibu ọrụ nye ndị na-agụ ya bụ blogger, ọ bụghị Microsoft. Ndị na-ede blọgụ mbụ nwetara laptọọpụ ha na ihe mbụ ha blọgụ banyere ya? Hey, enwetara m laptọọpụ a dị jụụ na Microsoft. Maa amụma?! Nke ahụ bụ ngosi na ugbu a ị maara.
Achọrọ m Microsoft kesaa laptọọpụ na Vista. Achọrọ m ịnụ ka esi aga, ma ọ bara uru na ego ahụ. Microsoft tinye m na ndepụta gị! Ndị na-agụ m chọrọ ịma!
Naanị ndudue e mere na mbibi a niile bụ nkwado Microsoft. Nke a bụ otu ọ ga - esi bụrụ na m ga - ere ahịa ahụ:
Ajụjụ si Blogger (olu ojii): Mazi Ọjọọ Microsoft! Anyị anụla na ị kesara ụfọdụ laptọọpụ dị oke ọnụ na Vista tinyegoro na ha na ndị na-ede blọgụ A-list. Anyị na-eche na ị na-anwa iji onyinye ndị a dị egwu emetụta ndị na-ede blọgụ ndị a na-enwe olileanya na a ga-eme ka ha nwee ike ịdebanye nke ọma maka ahụmịhe Vista ha. Nke a ọ bụ eziokwu?
Nzaghachi si Douglas Karr, VP Marketing nke Microsoft (ihe bụ eziokwu): Ee, dumbass. Nke ahụ bụ ọrụ m.
Ngosipụta Zuru Ezu:
Microsoft akwụbeghị m ụgwọ ọ bụla maka ọkwa a. N'ezie, m na-eziga ya na Mac.
Enwetara m tiketi Colts n'otu oge site na Pat Coyle. Ọ dị mma na onye ọ bụla? Enweela m otu ụda na blọọgụ ya ma ọ tụrụ m n'anya na ha izu ole na ole gara aga. Na-ewesara m iwe? Enwere m nke ọ bụla n'ibe akwụkwọ ụlọ m na nkwụghachi? Enwere ike, ejighi m n'aka. Ọ bụ ezigbo mmadụ nwere nnukwu blog ya mere m na-ekwukarị ya. Gaa gụọ ya! Gotten nweta ngwaọrụ ọhụrụ ha? Ọ dị ezigbo mma, lee ị na-aga:
Emebere blog a na PHP na MySQL na ụyọkọ plugins ndị KWES 100R XNUMX KWES XNUMXR XNUMX XNUMX% FREE. Ahụrụ m ha n'anya! Ugbu a, tiere ha mkpu maka inye m ya n'efu, ọ ga-e?!
Enyemaka Aka: Ọnọdụ nke Mbọn
onye smith bob